Muddo xileedka safiirka Soomaaliya ee Jabuuti oo dhamaaday
Maxamed Cali-Nuur Xaaji ayaa dhowan loo magacaabay xoghayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya.
DJIBOUTI CITY, Jabuuti – Muddo xileedka danjiraha Soomaaliya ee Jabuuti ayaa idlaaday, sidda lagu xaqiijiyey war-saxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda xukuumadda federaalka ah.
Qoraalka oo lasoo dhigay bogaga xiriirka bulshadda ee wasaaradda ayaanan lagu caddeynin cidda bedalaysa Maxamed Cali-Nuur Xaaji oo dhowaan loo magacaabay Xoghayaha Joogtada ee wasaarada.
Kahor inta uusan kasoo hayaamin Jabuuti, Maxamed, sidda ku xusan bayaanka, ayaa ra'iisul wasaaraha Jabuuti, Abdoulkader Kamil Mohamed wuxuu ka gudoomay biladda ugu sareysa ee waddankaas.
"Billadda, oo ah abaalmarinta ugu sarraysa ee Jabuuti, ayaa loo xidhay Mudane Danjire Maxamed Cali-Nuur, taasi oo ka dhignayd howsha uu qabtay intii uu ahaa Safiirka Soomaaliya ee Jabuuti iyo dadaalkiisa uu ku xoojinayay xiriirka labo geesoodka iyo iskaashi wadaagga ee ka dhexeeya labada dal iyo labada dad ee walaalaha ah," ayay wasaaradda ku tiri qoraalka.
Danjire Maxamed oo farxad ka muujiyey abaalmarinta la guddoonsiiyey ayaa u mahadceliyey hogaanka Jamhuuriyadda Jabuuti.
"18 June, ayaa Danjire Maxamed Xaaji waxa uu Shahaado Sharaf ka guddoomay Xoghayaha Fulinta ee IGAD, Dr Workneh Gebeyehu, oo la xiriirtay kaalintiisa gobolka ee nabadda, amniga iyo horumarka," ayaa lagu soo gabagabeeyay warka qoraalka ah ee ay soo saartay wasaaradda.
Bishii Maaj ee sanadkan 2020 ayay ahayd markii Maxamed Cali-Nuur Xaaji uu la wareegay xilka xoghayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda, isagoo bedelay Maxamed Isxaaq Aadan oo KMG ahaa.
Wasaaradda aanay yeelan Xoghaye joogto tan iyo 26 Janaayo, sanadkii 1991 oo dowladdii dhexe ee dalka ay burburtay xilligaasi.
Cabdullahi Xaaji Cabdiraxmaan "Sayidka" ayaa wuxuu ahaa xoghayihii joogtada ugu dambeeyay Wasaaradda, dhammaadkii 1990.
Tan iyo dib-u-soo-nooleynta shaqadii iyo howlihii Wasaaradda Arimaha Dibadda xilligii dowladihii ku-meelgaarka ahaa laga soo bilaabo 2000 illaa 2012, waxaa maareyn jiray dhowr agaasimeyaal guud.
Tan iyo sanadkii 2013, Wasaaradda Arimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga waxaa maareeyay sagaal xoghaye joogto kumeel gaar ah, waxaana magacaabida Maxamed ay soo afjartay taxanahaas oo jiray.
Hogaamiyaha maamulka Somaliland ayaa sidoo kale fariin u diray Beesha Caalamka.
Ismaaciil Geelle oo loogu baaqay "in uusan Jabuuti u horseedin burbur"
Afrika 06.06.2020. 09:00
IGAD oo shaacisay xudunta khilaafka dalalka xubnaha ka ah ururkaas
Afrika 29.10.2019. 07:03
Afhayeenka Baarlamaanka Jabuuti oo lagu soo dhaweeyay Muqdisho
Soomaliya 07.10.2019. 11:35